Shan arrimood oo “fududeeyay” in la rido madaxda Galmudug iyo Hirshabelle | Kobciye24.com
Maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waa kuwa ugu da’da yar ee Soomaaliya ka jira, haddana waa kuwa madaxweynayaashooda ay xilka hayaan muddo aad u gaaban.
Saddexda maamul ee kale, madaxweynaha ugu yar ayaa xilka haya seddax sanno, mana muuqato wax saansaan ah oo xilka looga qaadayo, waxayna hormuud ka yihiin maamulo salkooda adagyahay sida uu ku doodayo xeeldheere siyaasadeed oo BBC-da u waramay oo lagu magacaabo Xasan Xayle.
Waa labadii maamul ee ugu dambeeyay ee la dhiso, qeybna ka ah nidaamka federaalka Soomaaliya, sida uu qabo falanqeeye siyaasadeed Xasan Xayle oo London ku sugan, ma ahan maamullo wali adkaystay, lehna waayo aragnimo ku filan oo ay xilka kusii xajistaan.
Labadan maamul ma lahan illo dhaqaale oo u gaar ah, si ka duwan maamullada kale oo gaaray isku filnaan illaa xad ah oo ay kaga maarmaan dowladda dhexe.
Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa horey u sheegay in uu wado qorshayaal uu deked kaga dhisayo Ceel Macaan, garoonna ka furayo Cisaley, si buu yiri maamulka uu u helo illo dhaqaale oo hawlihiisa ku kala wadi karo. Haseyeeshee qorshayaashaasi waxbo kama fulin.
“Waxaa jirta in madaxda maamuladan aysan muujinin rabitaan dhab ah oo ah in ay wax dhismaan, waxaad arkaysaa in markasta ay jecelyihiin in ay iska joogaan magaalada Muqdisho oo aysan waqti fiican ku qaadanin Cadaado iyo Jowhar”, ayuu hadalkiisa ku daray Xasan Xayle oo siyaasadda ka faallooda.